Singapore kwadoro nnwale iku ume nke COVID-19 na-enweghị mmekpa ahụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Singapore » Singapore kwadoro nnwale iku ume nke COVID-19 na-enweghị mmekpa ahụ
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 24, 2021
Na mmekorita ya na Singapore Ministry of Health, Breathonix ga-ebu ụzọ tinye ule ya na Tuas Checkpoint, nke jikọtara Singapore na Malaysia.
Nnwale ohuru nwere ike ichoputa ihe ndi ozo di iche iche na ume mmadu
Nnwale ahụ ga-abụ ọsọ kachasị ọsọ n'ụwa na ngbanwe ya
A ga-eji nyocha ume iku ume na-enweghị ike ịnwale ndị mmadụ na-abata mba ahụ si Malaysia
National University of Singapore's Breathonix COVID-19 test - nke mepụtara site na "teknụzụ nchọpụta kansa", enwetala nnabata gọọmentị nwa oge na Singapore.
A ga-eji otu oge ‘ikuku na-enweghị mwakpo’ ume nwalee ndị mmadụ na-abata n’obodo ahụ si Malaysia.
Dị ka Mahadum Mba nke Singapore, ule ohuru nwere ike ichoputa Ngwongwo Organic Volatile na ume mmadu iji hu ma odi mma ma obu. A ga-ejikwa ule ahụ n'akụkụ ule ọdịnala ọdịnala ndị ọzọ, ndị nnyocha ahụ kwuru.
A nwalere ule Breathonix na Changi Airport, National Center for Disease, na Dubai, na teknụzụ iku ume agaghị enwe ike ibute ọrịa ọ bụla, dịka ndị guzobere ya si kwuo.
Nnwale ahụ ga-abụ nke kachasị ọsọ na ụwa na nloghachi ya ma nwee ike ịbụ onye na-egwu egwuregwu na ebe nsonaazụ ngwa ngwa dị mkpa, gụnyere ọdụ ụgbọ elu na ala.
Singapore edeela ihe karịrị 60,000 nke Covid-19 kemgbe mmalite nke ọrịa a, na ọnwụ 32. Dị ka World Health Organization, ihe karịrị nde ọgwụ ogwu ejiwo ebe ahụ ugbu a.